Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 04/02/2020)
Zavatra iray mety tsy tonga saina, dia ny hoe tsara labiera Route amin'ny Train Hita ao amin'ny maro gara. The Sheffield Tap dia iray amin'ireo tsara indrindra, mampiseho ny 30 casks ary ny drafts - ny sasany izay manasongadina voafantina avy any an-toerana sy somary mazava breweries. Afaka mahazo ny fiaran-dalamby, ka mandehana mitsidika ... ny sasany amin'izy ireo na hijanona fotsiny mametraka sy handany fotoana bebe kokoa azy ireo santionany. Ahoana no mangatsiatsiaka?!
Ny gara dia 10 minitra mandeha avy amin'ny Cafe, noho izany dia tsy mahagaga izany eo amin'ny Beer Route lamasinina – Best labiera tany Eoropa.
Amin'izao fotoana izao ny fananganana no tompony Sam Smith Old Brewery. Ny Pubs dia handeha mba ho tsara tarehy trano, nentim-paharazana sy ny Cozy ales interiors. Tsy misy marika lehibe, mamirapiratra fotsiny ny fanatitra avy amin'ny labiera in Tadcaster, Atsinanana Region.
Na ny labiera efa maoderina hatramin'ny 1993, ny kilaometatra ny fahanterana LAKALY FITEHIRIZANA sisa ambanin'ny tany dia tafiditra ao anatin'ny fitetezam-paritra. A subterranean ramble mifarana amin'ny hazo misokatra koba sy roa ny hazo goavana barila ny karazana izay nampiasaina ny fahanterana rehetra Pilsner Urquell.
Afaka handefa anareo ao amin'ny miafina? Ny tsara indrindra dia labiera any Alemaina tsy in Munich. Alemaina manana be miavaka isan-karazany ny labiera. Na dia maro tamin 'ny firenena isan'andro brews Mahavariana fa tsara. Saingy tsy ny labiera rehetra dia afaka ny ho tsara, na dia ao amin'ny tany izay labiera dia angano. Raha mitady isan-karazany ary tianao ny labiera miaraka amin'ny toetra sy ny sizzle, manao ny tenanao ho famindram-po sy Mikasa ny fitetezam-paritra ho an'ny firenena indray Bavarian, izay labiera dia ampahany amin'ny ny kolontsaina eo an-toerana ary brewed ny tena olona amin'ny tantara mba hilaza.
Fitopololahy Misy zavatra kely iray- ary ny tapaky ny volana habe breweries hiasa ao amin'io ampahany amin'ny Bavaria. Ny sasany amin'izy ireo mampiaraka niverina tany amin'ny 1400s. Iraika ambin'ny folo lahy tamin'izy ireo, na napetraky ny fiangonana, mihazakazaka amin'ny trano fitokana-monina na ny an'ny andriana. Telo mbola niasa ny alemà barons koa ny anankiray dia ny tranainy indrindra Abbey labiera eto amin'izao tontolo izao. Lower Bavaria dia harena nafenina raha ny amin'ny labiera.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-beers-route-europe/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)